နိုင်ငံရေး	— July 11, 2012 at 8:01 am	ရခိုင်အရေးကမ္ဘာ.ခေါင်းဆောင်နှင့်ဆွေးနွေး
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်(ပြည်ပ) ၏ နာယကကြီး ဦးခင်မောင်ကြည် က ယခုနှစ် ဇွန်လ ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ သော ဌာနေတိုင်းရင်း သားရခိုင်လူမျိုးများနှင့် တဘက်နိုင်ငံမှ တရားမ၀င်ခိုးဝင် အခြေချနေထိုင်နေကြသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုး များ၏ ရန်ပွဲကို ပြည်ပနေကိုယ်ကျိုးရှာစားနေကြသော ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများက ပြဿနာပိုမို ကြီးထွားလာစေရန် ဘာသာ ရေးစစ်ပွဲနှင့် လူမျိုးစစ်ပွဲအဖြစ် ဖန်တီးနေကြပုံများကို ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို.ပြင် ရိုဟင်ဂျာ ဇစ်မြစ်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ဖန်တီးရှင်များ အကြောင်းကို ပြောဆိုရှင်းပြရုံသာမက စာဖြင့်ရေး သားပြီးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရန်ပွဲကြောင့် ရခိုင်လူမျိုး အများအပြားသေကျေ ပျက်စီး ပြီး အိုးအိမ်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ မီးရှို. ခံရသည်များကို အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်ပ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ. များ (NGOs) က ကျူးကျော်လာရောက်နေထိုင် သူဘင်္ဂလီ များ ကို သာအဓိက အကူအညီပေးနေ သည့်ကိစ္စကို သမာသမတ်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ဖြင့် တကယ်နစ်နာသူရခိုင် လူမျိုး များ ကိုသာ ခံစားနိုင်ရန် ပြော ဆိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ကချင်လူမျိုးများကို အထူးကိစ္စ တရပ်အနေဖြင့် အကူ အညီ ပေးရန်ကိစ္စ ကိုဖြစ်ပျက်နေသော ရန်ပွဲနှင့် စစ်ပွဲများကို ရှင်းပြကာ တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ လူ.အခွင့်အရေး ဘမ်း ပြပြီး ဖွဲ.စည်းထားသော အဖွဲ.များသည် ငွေမျက်နှာ ဘက်လိုက်မှုများရှိနေ၍ကမ္ဘာ. နိုင်ငံရေးပါတီ များ ၏ အဖွဲ.ချုပ် ဖြစ် သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိုရှယ်လစ် အဖွဲ.ချုပ်ကြီး ကရခိုင်ပြည်နယ် သို. ကိုယ်စားလှယ် များ စေ လွတ်၍ ဆောင် ရွက် ပေးရန်ကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။
Related Postsတကျော့ပြန် ရခိုင် အကြမ်းဖက် ဆူပူမှုတွင် ALP ပါဝင် ပတ်သက်မူ မရှိဟု ဆို မြေမျိုရာမှ ရခိုင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ကို ရွှေစေတီ ဆရာတော်က ပြောကြား ရခိုင် ပါတီ ၂ ခု ပေါင်းစည်းရေး ALD မှ RNDP ကို ကမ်းလှမ်းပြီအိန္ဒိယ အခြေစိုက် ရခိုင် ANC ဥက္ကဌ တာဝန်မှ နုတ်ထွက်လူပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်သည့် ရသေ့တောင် ရခိုင်ဒေသ လူထု အစည်းအဝေး မေယုခန်းမတွင် ကျင်းပခွင့်မရ
ဆက်စပ်သတင်းALD မြို့နယ် ခေါင်းဆောင်များ သင်တန်းပေးမည်ကွန်မြူနစ် ပါတီ၏ ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရသော RNDP ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦး တရုတ်ပြည်သို့ ထွက်ခွာရတပ ပါတီ ဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေး ကျောက်ဖြူတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ALD မြို့နယ်ရုံးဖွင့်ရန် ခေါင်းဆောင်များ မောင်တောသို့ ရောက်ရှိရခိုင်အခြေအနေ တည်ငြိမ်နေတောင်ကုတ်မြို့မှ နိုင်ငံရေး ပါတီ၊ လူမူ အဖွဲ့အစည်းများအား သက်ဆိုင်ရာမှ အစည်းအဝေးခေါ်ယူရခိုင်အမျိုးသား ဒါဇင်ဝက်ခန့် NLD ဗဟို ခေါင်းဆောင်များ အဖြစ် ရွှေးချယ်ခံရ“မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် ရခိုင်တို့၏ ကံကြမ္မာ” စာတမ်းကို သြစတြေးလျ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်တွင် ဖတ်ကြားမည်ရခိုင်အမျိုးသားနေ့သတ်မှတ်ရေး ကြိုးပမ်းမူ(ယာယီ) ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းNLD ဗဟို ညီလာခံ အတွက် ရခိုင်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွှေးပြီ (နိရဉ္စရာ သတင်းများကို မည်သူမဆို လွှတ်လပ်စွာ ကူးယူဖေါ်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် သတင်းရင်းမြစ်နေရာတွင် နိရဉ္စရာ နာမည်ကို ဖေါ်ပြရပါမည်။) Share: